Fadin-tseranan'i Arzantina | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Arzantina, kolontsaina
Arzantina raha ny marina izany a firenena mpifindra monina, Na dia be dia be aza ny jeografia misy azy, arakaraka ny alehanao no hahafahanao mifandray amin'ny fomba amam-panao izay tsy avy amin'ny fifindra-monina eropeana fa avy amin'ny tompon-tany sy ny mpifanolobodirindrina amin'i Amerika Latina.
Noho izany, Samy hafa ny fomba amam-panao Arzantina ary azo antoka fa ho hitanao ilay tianao indrindra amin'ny resaka gastronomy, fiaraha-monina na fitondran-tena. Handeha any Arzantina ve ianao? Fotoana tsara raha Eoropeana ianao satria ny fihenan-danja ny peso dia tsara tamin'ity governemanta farany ity ary ny fanovana dia hitondra anao tsara.
1 Fomba amam-panao Arzantina gastronomic
2 Fomba amam-panao arzantina
Fomba amam-panao Arzantina gastronomic
Sakafo aloha. Misy sakafo sasany izay mahazatra an'i Arzantina ary azo raisina ho mari-pamantarana azy, na dia lanin'ny firenena hafa any amin'ny faritra aza izy ireo. Miresaka momba ny asado, dulce de leche ary empanada.
Firenena mpanondrana harena an-kibon'ny tany hatrizay i Arzantina, ary ny tsy fisian'ny indostrialy matotra no tena olana lehibe amin'ny fampandrosoana, ka ny omby, ny varimbazaha ary ny soja izao no be mponina ao amin'ireo pampas mando mando. Ny hena dia matsiro, tena tsara kalitao, noho ny kijana, noho izany tsy misy Arzantina izay tsy manomana asado farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro. Ny kilasika dia ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny fianakaviana na namana.
Eto, ny henan'omby dia samy manana fahatapahana sy anarana samy hafa arakaraka ny toerana misy ny firenena. Loin, esory ny natsatsay, but, rump, matambre. Mofo chorizo, choripan, mofo misy saosisy ra, morcipán. Ny achuras dia tsy tokony hanjavona koa amin'ny grine arzantina: saosisy, gizzard, voa, saosisy ra, chinchulines (ny tsinay). Ny tompona barbecue tsara dia lasa matihanina rehefa mandeha ny fotoana, barbecue aorian'ny barbecue, fanamby aorian'ny fanamby, ka raha tsara vintana ianao mihaona iray dia hihinana barbecue tsara indrindra amin'ny fiainanao ianao.
Inona no miaraka amin'ny hena? Eny, miaraka amin'ny salady na chips, mofo amin'ny andro, saosy matsiro roa (saosy chimichurri sy creole), ary makà hepatoprotector ary avy eo mandehana matory sy mandevona. Fety ho an'ny lanilany!
Ny iray amin'ny fomban-drazana gastronomika dia ny caramel, mamy vita amin'ny ronono sy siramamy izay mainty volontany ary tena mamy. Tian'ny Arzantina izany ary tsy misy vatomamy na mofomamy tsy manana dulce de leche.
ny faktioraOhatra, ny koba mamy mahazatra fanaon'ireo mpivaro-mofo ary amidy amin'ny singa na am-polony maro, dia manana karazany maro miaraka amin'ny dulce de leche ary mitovy amin'izany ny gilasy ary vatomamy (alfajores, vatomamy, sôkôla).
Minoa ahy ianao, raha manandrana izany ianao dia ho tianao ary te-hitondra an-trano ireto entana tsara sasany ireto izay amidy amin'ny kiosk sy fivarotana lehibe rehetra. Ary farany, ny empanadas. Ny Empanadas dia vita amin'ny faritra maro any Amerika Latina, ary ny karazany avy any avaratr'i Arzantina no malaza eto. Izay avaratra izay akaiky kokoa an'i Bolivia sy Però ary izany no mahatonga ny lovia ao aminy na ny fiteniny aza manana ny ankamaroan'ireo faritra ireo.
Misy karazana empanada isam-paritany fa amin'ny ankapobeny dia avy izy ireo hena na humita (katsaka, katsaka), namboarina na nendasina. Tian'ireo mpitia Empanadas ho azy ireo any an-trano izy ireo, manamboatra koba sy mameno ao an-trano, fa any amin'ny tanàna lehibe dia very ny fomban-drazana ary androany ianao dia afaka mividy azy ireo amin'ny fivarotana rehetra izay mivarotra empanada sy pizza.
Na i Buenos Aires aza dia miavaka amin'ny fivarotana karazana empanada marobe izay tsy tazana eto afovoan-tany: ham sy fromazy, legioma, miaraka amin'ny bacon sy plum, miaraka amin'ny whisky, akoho sy ny maro hafa sns.
Ary farany, amin'ny resaka fisotroana, tsy azonao atao ny tsy miraharaha ny vady. Izany dia mba hampahahendry vita amin'ny ravin'ny zavamaniry antsoina hoe yerba mate (tapaka ny ravina ary totoina), fonosina sy amidy. Aorian'izay, ny Arzantina tsirairay avy dia manana vady ao an-trano (kaontenera kely kokoa na lehibe kokoa, vita amin'ny hazo, vera, seramika na gourd maina, ohatra), ary jiro handrindrana ny fampidirana.
Napetraka ao anaty ny yerba, ampiana rano mafana tsy mangotraka ary sotroina, aleo amin'ny orinasa salama satria ny fanahin'ny vady dia eo amin'ny fiaraha-monina, ifampizarana.
Olona malalaka sy sariaka ary tia fiaraha-monina ny Arzantina. Raha tian'izy ireo ianao dia tsy manana olana amin'ny firesahana, manasa anao any an-tranony ary hiara-mivoaka aminao. Buenos Aires dia tanàna lehibe dia lehibe manana gadona mihoatra ny renivohitr'izao tontolo izao, ka miala ny alarobia ny olona. Manana fiainana andavanandro be dia be ny tanàna, bara sy trano fisakafoanana maro, fa ny Arzantiniana koa dia tia sinema sy teatra matetika ary mandeha amin'ny arabe na amin'ny alina aza.
Any amin'ny manodidina dia mahazatra ny mahita vondrona namana miresaka amin'ny maraina, mipetraka eo an-joro na amin'ny kianja. Ny tanànan'ny afovoan-tanindrazana aza dia manana fiainana ara-tsosialy betsaka noho Buenos Aires satria amin'ny maro amin'izy ireo, indrindra any avaratra, masina ny fialantsasatra ka tapaka ny ora fiasana aorian'ny mitataovovonana.
Avy eo, satria kely ihany koa ireo tanàna ary tsy misy olona mipetraka lavitra be, dia afaka mivoaka isan'andro ianao fa ny ampitso dia misy fotoana miala sasatra kely foana.
Raha any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia tsy fahita firy ny olona lavo tsy fantatra amin'ny tranon'ny namana iray eto matetika ny mitsidika namana tsy misy fampandrenesana. Maneno lakolosy sy voila izy ireo. Tsy misy olona tafintohina, tsy misy mila mijery ny fandaharam-potoana. Na dia fivoriana ao an-trano no mahazatraAngamba hihinana ary avy eo mivoaka, angamba ho an'ny barbecue. Ny namana foana no fanitarana ny fianakaviana. Ny fianakaviana iray, etsy ankilany, dia akaiky hatrany ny Arzantina.
Rehefa Alahady, ohatra, dia mahazatra ny fianakaviana mivory miaraka amin'ny sakafo atoandro. Ny fanao dia mahazatra an'ny tanàna mpifindra monina ary na dia asado aza no sakafo mahazatra, dia toy izany koa ny paty. Nahazo fifindra-monina lehibe avy tany Italia i Arzantina ka maro ny teratany Italiana izay Tian'izy ireo ny paty. Raha ny taranaky nones Ny fanao amin'ny fanangonana manodidina ny lovia ravioli na paty misy saosy dia efa lany tamingana dia tena mahazatra. Fomba fanao hajaina iray hafa ny mihinana gnocchi na gnocchi amin'ny faha-29 amin'ny volana.
Inona avy izany ny fomba amam-panao Arzantina? Asado, empanadas, dulce de leche (aza adino ny manandrana ny gilasy amin'ity tsiro ity), vady (miaraka amin'ny ahitra, mamy na mangidy, na dia mangidy foana aza ilay nentim-paharazana), miresaka amin'ny namana, fitsangatsanganana misotro labiera na MANDRAKIZAY resaka kafe izay ahafahan'ny Arzantina iray mamaha an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fifanosehana eo anelanelan'ny hevitra politika, izay mazava ho azy fa eny amin'ny habakabaka foana ny Peronism, na iza na iza no tia azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Arzantina » Fomba amam-panao Arzantina
Fomba amam-panao Irlandey
Ankafizo ny gastr gastrikan'i Portugal